မြန်မာနိုင်ငံ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ ကွန်ဒိုများ ရောင်းရန် | ShweProperty.com
ရောင်းရန် -ွGolden Link Condo
*Location – Golden Link Condo , Bahan Town ship. *Price – 4000 Lakhs *Property Type — Condo ( Lift ) *Area — 1620 sqft *Rooms formation —2-Master bedrooms , 1-bedroom , 5-Aircon ,Living room and Kitchen. *Other Features — Parquet , 3-Bathrooms and ready to live located at Bahan Town ship....
*Location – Golden Link Condo , Bahan Town ship. *Price – 4000 Lakhs *Property Type — Condo ( Lift ) *Area — 1620 sqft *Rooms formation —2-Master bedrooms , 1-bedroom , 5-Aircon ,Living room and Kitchen. *Other Features — Parquet , 3-Bathrooms and ready to live located at Bahan Town ship.
ဓမ္မစေတီလမ်း နှင့် လင့်လမ်းထောင့်
Property ID: S-1203012
ရောင်းရန် - Naing Group Condo
*Location – Naing Group Condo , Minglar Taung Nyunt Town ship. *Price – 2300 Lakhs *Property Type — Condo ( Lift ) *Area — 1809 sqft *Rooms formation —2-Master bedrooms , 1-bedroom , 4-Aircons ,Living room and Kitchen. *Other Features — Parquet , 3-Bathrooms and ready to live located…...
*Location – Naing Group Condo , Minglar Taung Nyunt Town ship. *Price – 2300 Lakhs *Property Type — Condo ( Lift ) *Area — 1809 sqft *Rooms formation —2-Master bedrooms , 1-bedroom , 4-Aircons ,Living room and Kitchen. *Other Features — Parquet , 3-Bathrooms and ready to live located…
upper Pan Soe Tan Street (အထက်ပန်းဆိုးတန်းလမ်း)
Property ID: S-1202996
ရောင်းရန် - Sein Yadanar Condo (စိန်ရတနာကွန်ဒို)
*Location – Sein Yadanar Condo , Ka mar yut Town ship. *Price – 1300 Lakhs *Property Type — Condo ( Lift ) *Area — 1350 sqft *Rooms formation — 1-Master bedroom, 1-Bedroom, 1-Aircon , Living room and Kitchen. *Other Features — Parquet , 2-Bathrooms and ready to live located at Ka mar yut…...
*Location – Sein Yadanar Condo , Ka mar yut Town ship. *Price – 1300 Lakhs *Property Type — Condo ( Lift ) *Area — 1350 sqft *Rooms formation — 1-Master bedroom, 1-Bedroom, 1-Aircon , Living room and Kitchen. *Other Features — Parquet , 2-Bathrooms and ready to live located at Ka mar yut…
Listed 13 July 2019
Property ID: S-1202747
ရောင်းရန် - ရောင်းရန် - မီနီကွန်ဒို - အင်းစိန်မြို့နယ် မဟာသုခိတာလမ်းမကြီးတွင်…
2nd Floor (1800 Sqft) မီနီကွန်ဒိုတိုက်သစ် ၁၅၀၀ သိန်း၊ မူလဈေး ၂၀၀၀ သိန်း။ ငွေတစ်ကြိမ်တည်းပေးချေဝယ်ယူသူအတွက် အထူးဈေး ၁၄၀၀…...
2nd Floor (1800 Sqft) မီနီကွန်ဒိုတိုက်သစ် ၁၅၀၀ သိန်း၊ မူလဈေး ၂၀၀၀ သိန်း။ ငွေတစ်ကြိမ်တည်းပေးချေဝယ်ယူသူအတွက် အထူးဈေး ၁၄၀၀…
Listed9July 2019
Advertiser : ဦးစန်းလွင်
Property ID: S-1202510
Mobile : 095108839
Office no : 09765108839
ရောင်းရန် - ကမာရွတ်ိမြို့နယ် PISM ကျောင်းအနီးတွင် ပြင်ဆင်ပြိးထားသော…
ဗဟိုလမ်းအနီး လမ်းကျယ် အဝင်ထွက်ကောင်း...
ဗဟိုလမ်းအနီး လမ်းကျယ် အဝင်ထွက်ကောင်း
Si Taw Gyi Real Estate
Advertiser : Si Taw Gyi Real Estate
Property ID: S-1201864
Asking Price : 1,050 သိန်း
Office no : 09 - 5506661,09_5167463,09-795506661
ရောင်းရန် - စမ်းချောင်းမြို့နယ် အခန်းအမှတ်- 16 စမ်းချောင်းလမ်း Sanchaung…
မီးဖိုခန်းနှင့် အိမ်သာ ရေချိုးခန်းတွင်တွင် ကြွေပြားကပ်ပေးထားပါသည်။ ဧည့်ခန်းနှင့် အိပ်ခန်းတိုင်းတွင် ပါကေး…...
မီးဖိုခန်းနှင့် အိမ်သာ ရေချိုးခန်းတွင်တွင် ကြွေပြားကပ်ပေးထားပါသည်။ ဧည့်ခန်းနှင့် အိပ်ခန်းတိုင်းတွင် ပါကေး…
Listed2July 2019
Advertiser : Steven Lun
Property ID: S-1201158
Asking Price : 2,400 သိန်း
Office no : 09952555906, 09761650547, 09250372219
ရောင်းရန် - 25’ x 50’ Condo ၊ ၈လွှာ၊ ဘုန်းကြီးလမ်း၊ လမ်းမတော်
25’ x 50’ Condo ၊ ၈လွှာ၊ ဘုန်းကြီးလမ်း၊ လမ်းမတော် ရောင်းမည် 2200သိန်း(ညှိနှိုင်း) ငှားမည် 10သိန်း(ညှိနှိုင်း) *ဘဏ်နှင့်ချိတ်ဆက်၍ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်*…...
25’ x 50’ Condo ၊ ၈လွှာ၊ ဘုန်းကြီးလမ်း၊ လမ်းမတော် ရောင်းမည် 2200သိန်း(ညှိနှိုင်း) ငှားမည် 10သိန်း(ညှိနှိုင်း) *ဘဏ်နှင့်ချိတ်ဆက်၍ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်*…
Listed 27 June 2019
Advertiser : Myanmar Ray
Property ID: S-1201597
Office no : 01381990, 01375574, 09775511777
ရောင်းရန် - မရမ်းကုန်းမြို့နယ် အမှတ်-၇၀၇၊ တိုက်-B၊ ကျိုက်ဝိုင်းဘုရားလမ်း၊…
သိန်း ၂၃၀၀ ညှိုနှိုင်း၊ AC4လုံး အသစ်၊ TV+Skynet၊ ရေခဲသေတ္တာ၊ အဝတ်လျော်စက် ၊ ဂက်စ် မီးဖို ၊ ဂက်စ်အိုး ...
သိန်း ၂၃၀၀ ညှိုနှိုင်း၊ AC4လုံး အသစ်၊ TV+Skynet၊ ရေခဲသေတ္တာ၊ အဝတ်လျော်စက် ၊ ဂက်စ် မီးဖို ၊ ဂက်စ်အိုး
Ma Nan Chit
Advertiser : Ma Nan Chit
Property ID: S-1201514
Office no : 09964599997
ရောင်းရန် - 19’ x 54’ Mini Condo၊ သုမင်္ဂလာလမ်းမကြီး၊ တောင်ဥက္ကလာပ
19’ x 54’ Mini Condo၊ သုမင်္ဂလာလမ်းမကြီး၊ တောင်ဥက္ကလာပ 1200သိန်း (ညှိနှိုင်း) • 2SBR • 2AC • ကိုရီးယားပါကေးခင်း • ရှေ့နောက်သံပန်း • sunshade…...
19’ x 54’ Mini Condo၊ သုမင်္ဂလာလမ်းမကြီး၊ တောင်ဥက္ကလာပ 1200သိန်း (ညှိနှိုင်း) • 2SBR • 2AC • ကိုရီးယားပါကေးခင်း • ရှေ့နောက်သံပန်း • sunshade…
Listed 19 June 2019
Property ID: S-1201055
ရောင်းရန် - NCS-004 မဟာဆွေကွန်ဒို တွင် (1160sqft) အကျယ်ရှိသောကွန်ဒိုအမြန်ရောင်းမည်။
Listed 12 June 2019
Property ID: S-1200570
Mobile : viber-09421072285
Office no : 01248209, 09421072285, 09795725561
ရောင်းရန် - NCS-003 ရွှေမိုးကောင်းကွန်ဒို တွင်(1690sqft) အကျယ်ရှိသောကွန်ဒိုအမြန်ရောင်းမည်။
Property ID: S-1200564
ရောင်းရန် - NCS-002 သစ္စာရိပ်သာလမ်းကွန်ဒို တွင်(1200sqft) အကျယ်ရှိသောကွန်ဒိုအမြန်ရောင်းမည်။
Property ID: S-1200563
ရောင်းရန် - NCS-001 ရွှေကမ္ဘာတာဝါ တွင် (25x60) အကျယ်ရှိသောကွန်ဒိုအမြန်ရောင်းမည်။
Property ID: S-1200560
Asking Price : 2,150 သိန်း
ရောင်းရန် - Condo Sale in Kamaryut (ID-889)
Condo for sale in Kamaryut Township. Condo area is 1328 sqft, organized by Living-room, One Master Bed-room, One Single Bed-room, Dinning, Kitchen and Bath-rooms. Condo with three air-conditioners. Condo has two lifts. Sale Price – 1400 Lakhs (Nego) Condo Sale in Kamaryut (ID-889) We can do negotiate…...
Condo for sale in Kamaryut Township. Condo area is 1328 sqft, organized by Living-room, One Master Bed-room, One Single Bed-room, Dinning, Kitchen and Bath-rooms. Condo with three air-conditioners. Condo has two lifts. Sale Price – 1400 Lakhs (Nego) Condo Sale in Kamaryut (ID-889) We can do negotiate…
Listed 11 June 2019
Property ID: S-1200527
ရောင်းရန် - Red Hill Condo
Master Bedroom,Generator,Basement Car Parking,Swimming Pool,Gymnasium,Fire Sprinkler System,Full Decoration,Carparking,အဝီစီတွင်း,New…...
Master Bedroom,Generator,Basement Car Parking,Swimming Pool,Gymnasium,Fire Sprinkler System,Full Decoration,Carparking,အဝီစီတွင်း,New…
Listed9June 2019
Ko Su Hlaing
Advertiser : Ko Su Hlaing
Property ID: S-1200408
Asking Price : 3,100 သိန်း
Mobile : 09422888852, 09422888853, 09422888894
Office no : 095080073
ရောင်းရန် - 1328Sqft ရွှေထန်းပင်ကွန်ဒို (လှည်းတန်းစင်တာအနီး)၊ ကမာရွတ်
1MBR 1SBR 3AC ဘုရားခန်း /ဧည့်ခန်း /ထမင်းစားခန်းပါ ပါကေးခင်း နံရံကပ်ဗီဒိုပါ မျက်နှာကျက်မီးဆိုင်းပြင်ထား Lift Car Parking လူကြီးမင်းတို့၏…...
1MBR 1SBR 3AC ဘုရားခန်း /ဧည့်ခန်း /ထမင်းစားခန်းပါ ပါကေးခင်း နံရံကပ်ဗီဒိုပါ မျက်နှာကျက်မီးဆိုင်းပြင်ထား Lift Car Parking လူကြီးမင်းတို့၏…
Listed7June 2019
Property ID: S-1200335
ရောင်းရန် - ရန်ကင်း တိုက်ခန်းအမြန်ရောင်းမည်
ရန်ကင်း ရွှေအုန်းပင်အိမ်ရာတိုက်ခန်းအမြန်ရောင်းမည်။ 900sq 1MBR' 2BR' 4A/C လေဝင်လေထွက်အထူး ကောင်းမွန်ပြီး ကားပါကင်နှင့်လုံခြုံရေးစနစ်ပါဝင်သည်။…...
ရန်ကင်း ရွှေအုန်းပင်အိမ်ရာတိုက်ခန်းအမြန်ရောင်းမည်။ 900sq 1MBR' 2BR' 4A/C လေဝင်လေထွက်အထူး ကောင်းမွန်ပြီး ကားပါကင်နှင့်လုံခြုံရေးစနစ်ပါဝင်သည်။…
Property ID: S-1200045
* Living Area - 1,700 sqft *2Master Bedroom * Living Room & Dinning Room * Kitchen * Bathroom & Toilet * Big Balcony * Newly renovated * western Style * Can furnish if required - Private stone garden terrace - Sandstone tile floors - Brown granite counter tops with hideaway fridge - Home bar with…...
* Living Area - 1,700 sqft *2Master Bedroom * Living Room & Dinning Room * Kitchen * Bathroom & Toilet * Big Balcony * Newly renovated * western Style * Can furnish if required - Private stone garden terrace - Sandstone tile floors - Brown granite counter tops with hideaway fridge - Home bar with…
Listed2May 2019
Property ID: S-1190713
Office no : +95 1 381 609
ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့နယ် အမှတ် 73 ဗိုလ်ရာညွှန့်လမ်း Royal Orchid Condoတွင် အဆင့်မြင့်ပြင်ဆင်ပြီးထားသော…
Downtown မှာတည်ရှိသောကြောင့် ရုံးခန်းဖွင့်ချင်သူများနှင့် Beauty Spa ဖွင့်လိုသူများအတွက် အထူးကောင်းမွန်သော ကွန်ဒိုဖြစ်ပါတယ်။…...
Downtown မှာတည်ရှိသောကြောင့် ရုံးခန်းဖွင့်ချင်သူများနှင့် Beauty Spa ဖွင့်လိုသူများအတွက် အထူးကောင်းမွန်သော ကွန်ဒိုဖြစ်ပါတယ်။…
Listed 22 April 2019
Ma San San Oo
Advertiser : Ma San San Oo
Property ID: S-1196130
Asking Price : 5,500 သိန်း
Office no : 094200255573
ရောင်းရန် - Code-8228 ဒဂုံမြို့နယ်အတွင်းရှိ အလုံးစုံပြင်ဆင်ထားပြီးသော…
Listed 12 March 2019
Property ID: S-1193507
Asking Price : 3,200 သိန်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရှိ ရောင်းရန် ကွန်ဒိုများ မြန်မာပြည်ရှိ ရောင်းရန်ကွန်ဒိုများ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေများ
အလုံ ရှိ ရောင်းရန် ကွန်ဒိုများ ဗဟန်း ရှိ ရောင်းရန် ကွန်ဒိုများ ဗိုလ်တထောင် ရှိ ရောင်းရန် ကွန်ဒိုများ ကိုကိုးကျွန်း ရှိ ရောင်းရန် ကွန်ဒိုများ ဒဂုံ ရှိ ရောင်းရန် ကွန်ဒိုများ ဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်း ရှိ ရောင်းရန် ကွန်ဒိုများ ဒဂုံမြို့သစ်အနောက်ပိုင်း ရှိ ရောင်းရန် ကွန်ဒိုများ ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်း ရှိ ရောင်းရန် ကွန်ဒိုများ ဒဂုံမြို့သစ်ဆိပ်ကမ်း ရှိ ရောင်းရန် ကွန်ဒိုများ ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း ရှိ ရောင်းရန် ကွန်ဒိုများ ဒလ ရှိ ရောင်းရန် ကွန်ဒိုများ ဒေါပုံ ရှိ ရောင်းရန် ကွန်ဒိုများ
လှိုင် ရှိ ရောင်းရန် ကွန်ဒိုများ လှိုင်သာယာ ရှိ ရောင်းရန် ကွန်ဒိုများ လှည်းကူး ရှိ ရောင်းရန် ကွန်ဒိုများ မှော်ဘီ ရှိ ရောင်းရန် ကွန်ဒိုများ ထန်းတပင် ရှိ ရောင်းရန် ကွန်ဒိုများ အင်းစိန် ရှိ ရောင်းရန် ကွန်ဒိုများ ကမာရွတ် ရှိ ရောင်းရန် ကွန်ဒိုများ ကော့မှုး ရှိ ရောင်းရန် ကွန်ဒိုများ ခရမ်း ရှိ ရောင်းရန် ကွန်ဒိုများ ကွမ်းခြံကုန်း ရှိ ရောင်းရန် ကွန်ဒိုများ ကျောက်တံတား ရှိ ရောင်းရန် ကွန်ဒိုများ ကျောက်တန်း ရှိ ရောင်းရန် ကွန်ဒိုများ
ကြည့်မြင်တိုင် ရှိ ရောင်းရန် ကွန်ဒိုများ လမ်းမတော် ရှိ ရောင်းရန် ကွန်ဒိုများ လသာ ရှိ ရောင်းရန် ကွန်ဒိုများ မရမ်းကုန်း ရှိ ရောင်းရန် ကွန်ဒိုများ မင်္ဂလာဒုံ ရှိ ရောင်းရန် ကွန်ဒိုများ မင်္ဂလာတောင်ညွှန့် ရှိ ရောင်းရန် ကွန်ဒိုများ မြောက်ဥက္ကလာ ရှိ ရောင်းရန် ကွန်ဒိုများ ပန်းပဲတန်း ရှိ ရောင်းရန် ကွန်ဒိုများ ပုဇွန်တောင် ရှိ ရောင်းရန် ကွန်ဒိုများ စမ်းချောင်း ရှိ ရောင်းရန် ကွန်ဒိုများ ဆိပ်ကြီးခနောင်တို ရှိ ရောင်းရန် ကွန်ဒိုများ ဆိပ်ကမ်း ရှိ ရောင်းရန် ကွန်ဒိုများ
ရွှေပြည်သာ ရှိ ရောင်းရန် ကွန်ဒိုများ တောင်ဥက္ကလာ ရှိ ရောင်းရန် ကွန်ဒိုများ တိုက်ကြီး ရှိ ရောင်းရန် ကွန်ဒိုများ တာမွေ ရှိ ရောင်းရန် ကွန်ဒိုများ သာကေတ ရှိ ရောင်းရန် ကွန်ဒိုများ သံလျင် ရှိ ရောင်းရန် ကွန်ဒိုများ သင်္ဃန်းကျွန်း ရှိ ရောင်းရန် ကွန်ဒိုများ သုံးခွ ရှိ ရောင်းရန် ကွန်ဒိုများ တွံတေး ရှိ ရောင်းရန် ကွန်ဒိုများ ရန်ကင်း ရှိ ရောင်းရန် ကွန်ဒိုများ ရွှေပေါက်ကံ ရှိ ရောင်းရန် ကွန်ဒိုများ
condo, for sale in all townships, Yangon